हाम्रो क्रान्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैनन् - क. घनश्याम भुसाल
प्रतिनिधि सभा सांसद घनश्याम भुसाल
प्रतिनिधि सभामा मंगलबार भएको बजेट छलफलमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद घनश्याम भुसालले व्यक्त गरेको धारणा -सम्पादक
म यो बजेटको समर्थन गर्न आएको हुँ । तर त्यो अकारण भने छैन । यसको पहिलो कारण त यो धेरैले रुचाएको बजेट छ । करिब आठ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुशी छन् । १३–१४ लाख बृद्व भत्ता बढेकोमा खुशी छन् । हामी निर्वाचित सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरु ६ करोडले खुशी छौं । धेरै मान्छे खुशी छन् । यसको प्रभाव निजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ र निजी क्षेत्रका कामदारको पनि तलब बढ्नेछ । यसर्थ उनीहरु पनि आशाका साथ खुशी छ ।
यो बजेटका कारण धेरै मान्छेहरु खुशी भएको कारणले सत्ताधारी दल पनि खुशी छ । विपक्षी पनि अहिले खुशी नै देख्छु । कमसेकम त्यसले एक दुई वटा अंकमा भए पनि केही खोट लगाएर ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको कुरा गरेको छ र प्रचार त्यसरी गरेको छ र ऊ खुशी छ । यसर्थ वस्तुतः यो लोकप्रिय बजेट भन्न सकिन्छ । यस हिसाबले मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ ।
दोस्रो, मेरो केही पूर्वाग्रहको तहसम्म मैले भन्न मिल्ने गरी, विकासका बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने कुरा, खासगरी हाम्रो परम्परागत कृषिमा थुप्रिएको जुन श्रम छ, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने कुरा, त्यसलाई रोजगारीमा ल्याउने कुरा नै अहिलेको क्रान्तिको सर्वथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।
यस अर्थमा फेरि पनि हामीले यो संकल्प, यो दाबी, यो सपना बजेटबाट देखेका छौं कि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यो भनेको अहिले विदेश जाने जुन दर छ, त्यो भन्दा बढी हो । यस अर्थमा श्रम बजारमा अहिले जति मान्छे आउँछन्, ती सबै मान्छे वा एक वर्षमा आउने जति युवा श्रम शक्ति देशभित्रै खपत हुन सक्छ भन्ने सपना र दाबी यसमा गरिएको छ । यस अर्थमा यसलाई मैले समर्थन गरेको हुँ ।
त्यसले गर्दा जसले ११ खर्ब खान्छ र ४ खर्ब लगानी गर्छ । यही स्थिति रहने हो? यत्रो समयपछाडि हामीले क्रान्ति गर्‍यौं । त्यो क्रान्तिले यसलाई फेर्छ कि फेर्दैन? यसको संरचनात्मक परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन? इतिहासबाट हामीलाई मुक्त पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यास्ता विषयमा बहुत कम छलफल चल्ने गरेको छ ।
धेरै वर्ष अगाडि राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो – हामी पञ्चायतमा किन लाग्यौं भन्दा राजाले साँच्चै रामराज्य ल्याउँछन् भनेर लागेको । साच्चै देश बनाउँछौं र त्यो न्यायपूर्ण, बडा राम्रो समाज हुन्छ भनेर नै लागेका थियौं । जब २०२५–०२६ सालतिर राजा महेन्द्र रेजा शाह पहलवीको निम्तामा इरान गए । त्यहाँको राजाको जुन सान सौकत देखे त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले अब मनोमानी गर्न थाले । यो राजेश्वर देवकोटाजीले भनेको शब्द मैले सुनेको हुँ ।
यसरी गएर हिजोको राजनीति र अर्थतन्त्र एक ठाउँमा मिल्न थाल्यो । दरबार अब विस्तारै दलाल पुँजीवादको नेता भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त पराधीन छँदैथियो । पराधीन अर्थतन्त्रको दलाल पुजीवादी नेता भएर, यस्तो अर्थ राजनीतिक गठबन्धन भएर हाम्रो रामराज्य पञ्चायतको अन्त्यसम्म आउँदा त रामराज्य त हाइज्याक नै भएको थियो भनेर उहाँले भन्नु भएको थियो ।
यस्तो नेक्ससको कुरा दलाल पुँजीपति र राजनीतिक मान्छेको नेक्ससको कुरा यहाँको मात्रै कुरा होइन । १९६१ मा क्यारे आइजन आवरले अमेरिकाका राष्ट्रपति हुदै गर्दा एउटा वक्तव्य दिएका थिए । मिलिटरी र यो इन्डस्ट्रीको नेक्सस हाम्रो प्रजातन्त्रका लागि एउटा खतरा हो भन्ने महत्त्वपूर्ण भाषण गरेका छन् । त्यो भनेको युद्ध सामाग्री उत्पादकहरु, हतियार उत्पादकहरुले त्यहाँको सत्तालाई, सांसदहरुलाई, राजनीतिक दलका नेता मिडियालाई अमेरिकामाथि युद्धको त्रास देखाएर हतियार किन्न लगाउने, यसरी यो मिलिटरी र इन्डस्ट्रिको नेक्ससले करिब करिब त्यहाँको प्रजातन्त्रमाथि खतरा मडारिरहने कुरा गरेका थिए र त्यो अहिले तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने एक्लै अमेरिकामा लाग्ने हतियारको खर्च त्यसपछिका अरु सबै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गर्दाखरि ११–१२ वटा मुलुकहरुसम्मको हतियारको खर्च एक्लै अमेरिकाले बेहोर्छ । जुन कुरा आइजन आवरले भनेका थिए ।
राजनीतिक दलले समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै छन् । अब दलाल पुँजीवादको स्तर विश्लेषण गर्दै जाने हो भने माथि निर्देशकहरु छन् । उनीहरुले राज्यलाई के गर्नुपर्छ, बाहिर के गर्नुपर्छ सारा कुराको खटनपटन गर्छन् । तिनीहरु तलतिर व्यवस्थापकहरु छन् । दलाल पुँजीवादको स्ट्रक्चरमा पार्टीहरु भित्र ती व्यवस्थ्थापकहरु छन् । जसले तलको उपभोक्ता समितिदेखि, भन्सार, खोला खानी सबैको नियन्त्रण गर्छ । तिनको वरिपरि धेरै छन् भन्न सकिन्छ । तिनले अलिकति पैसा दिएर लेख्न लगाउँछन्, बोल्न लगाउँछन् र एउटा जनमत बनाइरहन्छन् । त्यसको वरिपरि एउटा समूह छ । त्यो समूह अलि लडाकु समूह भन्दा हुन्छ । बाउन्सर टाइपको हुन्छ । त्यसले त्यो माथिको निर्देशकको पक्षमा काम गर्छ । त्यो भन्दा तल त बिचरा आसेपासे भइहाले ।
यसले गर्दा हामी खतरामुक्त चाहिँ छैनौं । यस अर्थमा हाम्रो क्रान्ति खतरामुक्त छैन, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैन भन्ने लाग्छ । छलफलकै क्रममा अलि अगाडि माननीय प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो ग्रोथ र सोसल जस्टिस सँगसँगै जाँदैन, जाँदैन, जाँदैन भनेको सुनेको हुँ । यो ठूलो प्रश्न थियो तर, हामीले वस्तुत कहिल्यै छलफल गरेनौँ । हामीले समृद्ध समाजवादको कुरा गरेका छौं भने प्रदीप गिरीले उठाएको कुरा सैद्धान्तिक रुपले समाधान गरेर जानुपर्छ ।
यसो हो भने समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्दा एक लाइनमा भन्ने हो भने अबको १०/१५ वर्षका लागि समाजवाद भनेको काम गर्न सक्नेहरुले काम पाउने, काम गर्न नसक्नेहरुले संरक्षण पाउने व्यवस्था हो । त्यही दौरानमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्छौ । मुलुक समृद्ध बन्दै जाँदा हामी समाजवादको अर्को ऐतिहासिक यात्रामा प्रवेश गर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तत, यो पपुलर बजेटको समर्थन गर्छु । तर बजेटहरुका बारेमा छलफल गर्न आह्वान गर्छु ।
पछिल्लाे - दलित मुक्तिको यात्रा लामो यात्रा हो – अध्यक्ष प्रचण्ड
अघिल्लाे - अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ईद उल—फित्रको अवसरमा शुभकामना व्यक्त